Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0113 lah
Lesona 01 : Jesosy, Mpahary ny lanitra sy ny tany
29 Des.12 - 04 Jan 13
Alahady 30 Des.12
"Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany." Gen. 1:1.
Misy fahamarinana lalina maro ao amin'io andalan-teny tsotra io, ny anankiray izay tena mifono hevi-dalina indrindra dia ny hoe nisy fiandohany ity izao tontolo rehetra izao ity. Mety toa tsy dia hatrany ifotony no fahitantsika io hevitra io ankehitriny, kanefa dia mifanohitra amin'ny finoana ny fisian'ny famoronana tsy manam-petra izy io, finoana izay efa notanana hatry ny ela. Nanomboka tamin'ny taonjato faharoapolo, rehefa nahazo laka ny ohatra iray ny amin'ny fototra niandohana antsoina hoe 'Big Bang' (fipoahana lehibe), izay vao neken'ny daholobe fa nisy fiandohany izao tontolo izao. Talohan'izay dia maro no nino hoe nisy hatrizay hatrizay izy. Maro ny olona no nanohitra ny foto-kevitra hoe noforonina izao tontolo izao, satria nidika izany fa nisy Mpamorona. (Ny marina dia izao: io anarana hoe 'Big Bang' io dia natao hanesoana ny fiheverana fa noforonina izao tontolo izao. Lasa natanjaka dia natanjaka anefa ny porofo naneho fa nisy fiandohana izao tontolo izao hany ka saika ny olona nanam-pahaizana rehetra no nanaiky izany, fara faharatsiny hatramin'izao aloha (ována na lavina matetika ny hevitry ny olona manam-pahaizana, na dia ireo noheverina taloha ho mendri-kaja fatratra aza).
Vakio ny Heb. 11:3. Inona no ambaran'io andininy io amintsika mikasika an'Andriamanitra sy ny famoronana izao tontolo izao?
Tahaka ny Gen. 1:1, ny Heb. 11:3 dia feno zava-miafina sy zavatra maro tsy hay hazavaina amin'ny fahalalantsika ankehitriny. Io andalan-teny io anefa toa miteny amintsika fa tsy nohariana avy tamin-javatra efa nisy rahateo izao tontolo izao. Tamin'ny herin'ny Tenin'Andriamanitra no namoronana izao tontolo izao; izany hoe, ny herin'Andriamanitra izany no nampisy na ny raha na ny angovo.
Ny famoronana avy amin'ny tsy misy dia fantatra amin'ny anarana hoe famoronana «ex nihilo». Ekentsika matetika fa mahaforona zavatra maro samy hafa ny olombelona, saingy tsy vitan'ny olombelona kosa ny mamorona avy amin'ny tsy misy. Haintsika ny manova ny endriky ny zavatra efa misy, fa tsy ananantsika ny hery hamoronan-javatra «ex nihilo» (avy amin'ny tsy misy). Ny herin'Andriamanitra - izay hery mihoatra ny an'ny olombelona - irery ihany no mahavita manao izany. Io no anankiray amin'ireo fahasamihafana manaitra indrindra misy eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona ary io no mampahatsiahy antsika fa miankina amin'ny Mpahary ny fisiantsika.
Ny marina dia izao: ny matoanteny hoe nahary ao amin'ny Gen. 1:1 dia avy amin'ny teny fototra hebreo anankiray izay tsy ampiasaina raha tsy enti-milaza ny asa famoronana ataon'Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany, fa tsy ny olombelona, no mahavita manao io karazana famoronana io (jer. koa ny Rom. 4:17).
Ny fisian'ny Mpamorona manana hery mihoatra ny herin'olombelona irery ihany - Mpamorona Izay misy ambonin'ny famoronana sy ankoatra ny famoronana - no fanazavana ara-lójika ny famoronana. Fa nahoana? Ento eo amin'ny iray kilasy ny valin-teninao amin'ny Sabata.